IKholeji Andre-Grasset - Isikole soLimi se-BLI eCanada
Izinhlelo zePathwayIkolishi u-Andre-Grasset
Indlela yakho eya eCanadaIkolishi u-Andre-Grasset
Isenzo sethu sinengqondo kuphela empumelelweni yomfundi; siqeqesha abantu abasha abakwazi ukuphumelela eyunivesithi nasempilweni yabo yobungcweti, abakwaziyo ukuqhakaza nokufeza amakhono abo aphelele. Lona ngumsebenzi iKolishi ebilokhu uwenza kusukela lasungulwa. Siqale sabelane ngombono ofanayo wokuphumelela kwabafundi. Ukuphumelela kwezemfundo, okuyimpumelelo esifundweni ngasinye, ukufezekiswa kwezinhloso zezifundo kanye nokuthweswa iziqu, kuhlala kuyinto ephambili. Njengesikhungo semfundo, okokuqala sikhuthaza ukutholwa kolwazi kanye nokuthuthukiswa kwamakhono okuqonda nezimo zengqondo eziqinisekisa ukulungiselela okwanele izifundo zaseyunivesithi. Kodwa-ke, impumelelo yomfundi idlula impumelelo yezifundo, noma ngabe kuyisimo esibalulekile sempumelelo yangempela. Ngakho-ke sikhuthaza ukukhula komfundi ngokudluliswa kwamagugu ayisisekelo nangokuhlangenwe nakho okuhlukahlukene esikumema ukuba aphile ukuze akwazi ukuthuthukisa konke ukunotha kobuntu bakhe nokuzuza amandla akhe aphelele emhlabeni wethu oguqukayo .
Ikolishi u-Andre-GrassetOlunye ulwazi
Izinga elisemthethweni le-French B1
ISAYENSI YAMANDLA, AMA-ARTS, IZIMALI NOKUXHUMANA, ISAYENSI YOKUXHUMANYA I DEC 4 YEMINYAKA I
Ngamaphrofayili ayo amabili ahlukahlukene, i-DEC yethu, eyenzelwe ngqo abathandi bezokuxhumana, izokunikeza ithuba lokuhlola izici eziningi zalo mkhakha ohehayo!
Ukutadisha kwezobuciko, izincwadi kanye nezokuxhumana, ngaphandle kwezibalo, ngezibalo noma ngezifundo ezithile zangaphambili, kuvula iminyango ezinhlelweni ezingaphezu kwenkulungwane. Ngemininingwane engaphezulu, thintana nedokhumenti elithi Zonke Izinhlelo Zenyuvesi Ezifinyelelekayo.
ISAYENSI, UKUFUNDA KANYE NOKUFUNDA AMA-ARTS I DEC 4 YEMINYAKA I
Isayensi, izincwadi kanye nezobuciko uhlelo oluhle kubantu abathinta konke! Indlela yayo yemikhakha ehlukahlukene ibeka imingcele phakathi kwezindlela zokuziphatha, noma ngabe sikhuluma ngezithombe nangezinhliziyo ku-physics, izincwadi ngefilosofi noma umlando wobuciko eFrance. Uma une-penchant yesayensi yemvelo, kepha konke kusuka emculweni kuya kwezobuciko, kwezepolitiki nakwezomnotho, le nkambo enothisiwe ingeyakho!
Emikhakheni emine, uzoqedela zonke izifundo zesayensi ezidingekayo ezifundweni zaseyunivesithi, izifundo ezine zesintu kanye neyodwa inketho yesihlanu, kanye nezifundo zobuciko ezintathu nezincwadi.
ISAYENSI YEMPILO NGIQHAWULA IMINYAKA EMI-4 I
I-DEC kumasayensi ezemvelo inikezela ngesayensi uhlelo oluhlukile eQuebec! Ngaphezu kokuthatha zonke izifundo ezijwayelekile ze-DEC kwisayensi yemvelo, lolu hlelo luzothuthukisa indlela yakho ngezingqungquthela, amaphrojekthi, izindatshana zesayensi, njll.
Yiba nezinga elisemthethweni le-French B1
Ikhophi yediploma yakho yesikole samabanga aphezulu nokubhalwa ngesiNgisi noma ngesiFulentshi, okubhalwe phansi futhi kwahunyushwa
Ubufakazi bezinga laseFrance (ukuhlolwa okusemthethweni)